Tigreega oo Wafdi uu General Getachew Hogaaminayo Israel u diraya. | ogaden24
Tigreega oo Wafdi uu General Getachew Hogaaminayo Israel u diraya.
Wafdi Heer sare ah oo kasocda mamulka Tigreega uuna Hogaaminayo Taliyihii Hore ee ciidanka Sirdoonka iyo Nabad sugida Itobiy General Getachew Assafe, ayaa kuwajahan magalada Tel-Aviv ee xarunta mamulka Israel.
Warkani oo lagu baahiyay Shabakada Tigrai Online ayaan lagu Faah Faahin u jeedada wafdiga uu Getachew Hogaaminayo, ay ugu kicitimayaan mamulka Yuhuuda oo kamid ahaa saaxiibadii kooxda TPLF xiligii ay Talada dalkaasi Itobiya Gacanta kuhaysay.
General Getachew oo dambiyo badan kagalay dadka Itobiyanka ah iyo shucuubtii kuhoos jirtay mamulkoodii Gumaysiga ahaa, ayaa isaga iyo saraakiil kale oo Tigree u badan waxaa Horay looga mamnuucay inta badan dalalka ree Galbeedka sababa laxidhiidha Tacadiyada iyo xasuuqa uu dadka Rayidka ah u Gaystay.
Boqashada Wafdigan oo sida shabakadu sheegtay aanay si rasmi ah u xaqiijin mamulka Tigreegu ayaa ah mid xukuumada Abiy ka madax banaan oo mamulka Tigreega u gaar ah, taasi oo muujinaysa in xaalada Itobiya ay haatan tahay mid Jaantaa Rogana oo kooxihii kumidaysnaa isbahaysiga EPRDF-na mid waliba iskeed isaga Nin Tooxsanayso,